Tsy ara-dalàna ny Fizahan-tany momba ny loza voajanahary any Holland: Tsy misy toerana azo antoka intsony
Home » Lahatsoratra farany farany » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Tsy ara-dalàna ny Fizahan-tany momba ny loza voajanahary any Holland: Tsy misy toerana azo antoka intsony
Vaovao Mafana Belzika • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana Netherlands • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao • fanorenana • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Nanjavona tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny sarintany fizahan-tany i Hollande
Ny tondra-drano nahatsiravina tamin'ity herinandro ity tao amin'ny State of Northrhine Westphalia, Alemanina dia niteraka adihevitra lehibe iray momba ny fiovan'ny toetrandro.
Ny loza dia naterina ihany koa tany Belzika sy Holland mpifanila vodirindrina aminy.
Manjary olana ho an'ny mpamaly voalohany ny fizahan-tany amin'ny loza voajanahary.
Ireo mponina ao amin'ny State of North-Rhine Westphalia any Alemana dia tsy hanadino velively ny horohoro tamin'ny alakamisy alina rehefa namono sy nandrava ireo tanàna iray manontolo ny oram-be. Tandindomin-doza hatrany ny tohodrano alemanina iray.
Namaky ny morony ireo renirano ary nandro ireo tranobe tany Belzika sy Alemana, izay 160+ no maty farafahakeliny ary 1,300 XNUMX no tsy hita popoka.
Trano sy arabe any Holandy no tototry ny rano ary mponina an'arivony maro any Roermond sy Venlo no voatery namindra ny tranony.
Ramatoa iray nitondra kitapo plastika manga teny an-tanany avy any Bad Neuenahr-Ahrweiler no nilaza tamin'ny mpanao gazety teo an-toerana: "Tsy manan-javatra na inona na inona isika" raha nanandrana nankany amin'ny toeram-pialofana iray niaraka tamin'ny pajama izy. Tonga tao anaty minitra vitsy ny rano ary namela faritra fanimbana lehibe mbola tsy niainan'ny firenena talohan'izay.
Nisy mpamaky iray nilaza eTurboNews: Eto amin'ny Germany, maro no maty tondra-drano, an-jatony no tsy hita, an'arivony maro no very trano. Manimba. Ity no krizy ara-toetrandro misongadina ao amin'ny iray amin'ireo faritra manankarena indrindra eto an-tany - izay nandritra ny fotoana ela dia nihevitra fa "azo antoka". Tsy misy toerana "azo antoka" intsony
Maro ny lalana rava, tonga hatrany amin'ny toerana ambony ny fitateram-bahoaka. Ny mponina sasany dia tsy afaka mivoaka ny tanànany
Tapaka ny herinaratra sy ny serivisy an-tariby any amin'ireo tanàna sy tanàna kely traboina.
Ny helikoptera avy amin'ny tampon-trano sy ny hazo dia avotra ny olona. Eo amorom-pandrodanana no misy ny tovovavy. Ny mpamono afo, ny tafika alemanina, ary ireo mpandray andraikitra voalohany dia niasa mandrakariva hamonjy olona.
Ankoatr'izay, ny olom-pirenena dia nandamina ny tenany hanampiana ny hafa. Betsaka amin'ireo vondrona olom-pirenena ireo no voalamina tsara ary mitana andraikitra lehibe amin'ny asa famonjena ankehitriny.
Ireo onjam-peo sy gazety eo an-toerana dia manome nomerao kaonty ho an'ireo izay te-hanome vola.
Celine sy Philippe avy amin'ny tanàna kelin'i Leichlingen eo anelanelan'ny Duesseldorf sy Cologne dia nanambady tamin'ny herinandro lasa.
Raha tokony ho herinandro mangina any an-trano hankalazana ny volan-volan-dry zareo dia manampy ny mpiray firenena mila fanampiana izy ireo izao. Androany dia nanampy vehivavy iray 90 taona voafandrika tao amin'ny efitranony izy ireo.
Ny filoha alemanina Frank-Walter Steinmeier dia andrasana hitsidika ireo faritra traboina amin'ny asabotsy. Ny Chancelior Alemanina Merkel, izay vao niverina avy tany Etazonia dia hitsidika ny faritra misy ny loza amin'ny alahady.
Teo ampitan'ny sisin-tany fotsiny, ao amin'ny Faritany Holandey Limburg, dia nisy loza iray nambara ary re ny ampongatapaka rehefa nandroaka ny dyke iray.
Hopitaly iray ao amin'ny tanànan'ny Holandey ao Venray, misy marary 200, no hesorina amin'ny toerany noho ny loza mety hitranga amin'ny tondra-drano.
Ny polisy holandey ao Venlo sy Roermond dia manome onitra ny mpizahatany voina. Mihabetsaka ny mpitsidika avy amin'ny tanàna hafa any Holandy sy ireo firenena mifanila aminy izay nitondra fiara nankany amin'ny faritra misy ny voina mba haka sary sy handefa azy ireo amin'ny media sosialy.
Tsy ara-dalàna izao any Hollande. Tena manelingelina ny ezaka famonjena izany, ary manafika ny tsiambaratelon'ny olona eo an-toerana.